तपाईंलाई कब्जियत हुन्छ ! यस्तो छ छुटकारा पाउने घरेलु उपाय – ईमेची डटकम
Posted byइमेची संवाददाता September 23, 2019 October 30, 2019 Leaveacomment on तपाईंलाई कब्जियत हुन्छ ! यस्तो छ छुटकारा पाउने घरेलु उपाय
कब्जियतका बारेमा हामीले प्राय: खुलेर कुरा गदैनौं । तर यो समया जो कसैलाई भइरहेको हुन्छ । कम पानी पिउने, असन्तुलित खाना खाने, कसरत नगर्ने र खराब जीवनशैली भएका मानिसलाई कब्जियतको सम्भावना धेरै हुन्छ । धेरै कब्जियतका रोगीमा पेट फुल्ने, खाना नपच्ने, दिशा गर्न गाह्रो हुने र पटकपटक शौचालय गइरहनुपर्ने जस्ता लक्षण देखिन्छ । कब्जियत जुनसुकै उमेरका मानिसलाई पनि हुन सक्छ । तर, महिला तथा वृद्धहरुमा यो समस्या बढी पाइएको छ । कब्जियत हुँदा घरेलु आयुर्वेदिक वा एलोपोथिक औषधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामान्य लागेपनि यो रोगको समयमै उपचार गरिएन भने पायल्स वा दिर्घकालीन असर हुन सक्छ । त्यसकारण, छिटोभन्दा छिटो यो रोगको उपचार गर्नुपर्छ । कब्जियत हटाउन घरेलु औषधी उपचार यस्तो छः
तातो पानी र कागती
कागतीमा पाइने साइट्रिक एसिडले पेटमा जम्मा भएको फोहोर निकाल्न सहयोग गर्छ । एक कप तातेपानीमा एउटा कागती निचोरेर केही दिन नियमित खाने गर्दा कब्जियत निको भएको पाइएको छ ।
जैतुनको तेलले पाचन पक्रिया क्रियाशिल बनाउँछ । यसको सेवनले पेट सफा राख्न सघाउँछ । बिहान खाली पेटमा एक चम्चा जैतुनको तेल खानाले कब्जियतका रोगीलाई फाइदा पुग्छ । यसमा कागतीको रस मिसाएर पनि खान सकिन्छ ।
पाकेको अम्बा तथा मेवा
पाकेको अम्बा तथा मेवा यी दुबै फल कब्जियतका राम्रो मानिएको छ । यी फल दिनको कुनै पनि समयमा खान सकिन्छ । यी फलमा पर्याप्त रेशा हुने भएकाले कब्जियत हटाउन सहयोग पु¥याउँछ । साथै, यसले शरीरलाई शक्ति पनि प्रदान गर्छ ।
फाइबर भएका खानेकुरा
गेडागुडी, बोक्रा हुने अन्न, फूलगोभी, आलु, बन्दागोभी, ब्रोकाउली, टमाटर, गाजर, साग, प्याजलगायत खानेकुरा कब्जियतका लागि उत्तम मानिन्छ । रेशायुक्त खानेकुरा सजिलै पच्नुका साथै कब्जियतको समस्या हटाउन पनि सहयोगी हुन्छ । कब्जियत निको पार्न लाभदायक अन्य फलफुलहरुमा केरा, मेवा, खरभुजा, आँप, स्याउ, मौसमलगायत पर्छन् ।
बैकिङ सोडा पिउनाले कब्जियत ९५ प्रतिशतसम्म ठीक हुन्छ । त्यसका लागि कपको एक चौथाइ पानीमा एक चम्चा सोडा राखेर बिहान उठेपछि पिउन सकिन्छ । यो क्रम केहि दिनसम्मा गर्नाले कब्जियतका रोगीलाई आराम मिल्छ ।
दही सबैजसोलाई मन पर्ने दुग्ध परिकार हो । कब्जियतको समस्या हटाउन पेटमा राम्रा ब्यक्टेरिया हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । सादा दहीबाट पर्याप्त मात्रामा प्रोबायोटिक ब्याक्टेरिया पाइन्छ । त्यसैले, दिनमा १÷२ कप दही पिउनु कब्जियत समस्यामा लाभदायी हुन्छ । यसलाई खानासँग खानु राम्रो हुन्छ ।
खजुर र दुध
यदि तपाईलाई कब्जियत भएका छ भने हल्ला तातो दूधमा ३ दिनओटा खजुर राखेर पिउनुहोस । यसलाई लगातार १ हप्ता पिउनुभयो भने निकै आराम महसुस गर्नुहुनेछ ।
दुध र घिउ
कब्जियत निको पार्न दूध र घिउको मिश्रण सेवन गर्नु पनि दाभदायी मानिएको छ । त्यसका लागि एक गिलास दूधमा १÷२ चम्चा घिउ मिसाउनुहोस् । राति सुत्ने बेला यो मात्रा पिउने गर्नाले कब्जियत निको हुँदै जान्छ ।
फर्सीको बीउलाई सानो आगोमा हल्का भुटेर त्यसलाई धूलो बनाउनुहोस । एक गिलास पानीमा उक्त पाउडर २० ग्राम राखेर ३ घण्टासम्म गल्न दिनुहोस् । त्यसलाई छानेर पिउनुहोस् । केहि दिन यही मात्रा दोहो¥याउनाले कब्जियतको समस्याबाट छुटकारा मिल्छ ।
दिनमा २ पटक आधा आधा गिलास बन्दागोभीको जुस पिउनाले कब्जियत भएकालाई फाइदा पुग्छ । बन्दागोभी सबैजसो मौसममा पाइन्छ । त्यसैले, यसको सेवन गर्न पनि सहज छ ।
प्रत्येक दिन दुइपटक पालुङ्गोको जुस पिउनुहोस् । यसबाट तपाईलाई निकै आराम मिल्नेछ । पालुङ्गोमा भिटामिन ए प्रशस्त मात्रामा पाइने शरीर स्वस्थ राख्न पनि यसले सघाउ पु¥याउँछ ।
Posted byइमेची संवाददाता September 23, 2019 October 30, 2019 Posted inस्वास्थ्य जिवनशैली